Lazarosy mivoaka! - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02 > Mivoaka i Lazarosy!
Fantatrao ve ny tantaran'i Jesosy izay nanangana an'i Lazarosy tamin'ny maty? Fahagagana lehibe izay mampiseho antsika fa manana fahefana hanangana antsika amin'ny maty koa i Jesosy. Fa mbola betsaka lavitra ny tantara, ary i Johannes dia milaza ny tsipiriany vitsivitsy izay misy dikany lalina kokoa ho antsika ankehitriny.
Mariho ny fomba nitantaran’i Jaona io tantara io. Tsy mponina tsy fantatra tany Jodia i Lazarosy fa rahalahin’i Marta sy Maria, ilay Maria izay tena tia an’i Jesosy ka nandraraka menaka fanosorana sarobidy tamin’ny tongony. Nasain’ireo anabavy niantso an’i Jesosy hoe: “Tompo ô, indro, marary ilay tianao.” (Jaona 11,1-3). Toa miantso vonjy amiko izany, saingy tsy tonga i Jesosy.
Mahatsapa ve ianao indraindray fa manemotra ny valiny Andriamanitra? Mazava ho azy fa nahatsapa toy izany tamin'i Maria sy Marta, saingy ny fanemorana dia tsy midika hoe tsy tian'i Jesosy izy ireo, fa kosa nanana tetika hafa tao an-tsainy satria hitany ny zavatra tsy hitan'izy ireo. Raha ny zava-nitranga, tamin'ny fotoana nahatongavan'ireo iraka tamin'i Jesosy dia efa maty i Lazarosy. Nilaza i Jesosy fa tsy hiafara amin'ny fahafatesana ity aretina ity. Diso ve izy? Tsia, satria nitodika tany ankoatry ny fahafatesana i Jesosy ary, tamin'ity tranga ity, dia fantany fa tsy ho faran'ny tantara ny fahafatesana, fantany fa ny hanomezana voninahitra an Andriamanitra sy ny Zanany no antony (and 4). Na izany aza, dia nampisaintsaina ny mpianany izy fa tsy ho faty i Lazarosy. Misy lesona ho antsika koa eto, satria tsy azontsika foana ny tena tian'i Jesosy holazaina.
Roa andro taty aoriana dia gaga ny mpianany tamin'ny nanoro hevitra azy ireo hiverina any Jodia. Tsy azon'izy ireo ny antony nanirian'i Jesosy hiverina tany amin'ilay faritra nampidi-doza, koa Jesosy dia namaly tamina fanehoankevitra manaitra momba ny fandehanana amin'ny mazava sy ny fiavian'ny maizina. Ary hoy izy tamin'izy ireo: "Matory Lazarosy sakaizantsika, fa hampifoha azy aho" (and. 11).
Nanazava i Jesosy hoe: "Maty i Lazarosy", ary mbola: "Faly aho fa tsy teo aho". Nahoana? "Ka mino ianao". Jesosy dia hanao fahagagana izay mahagaga kokoa noho ny hoe nanakana ny fahafatesan'ny olona marary iray fotsiny. Ny fahagagana dia tsy hoe fotsiny hamerenany an'i Lazarosy amin'ny fiainany - fa i Jesosy kosa dia nahalala izay hitranga eo amin'ny 30 kilometatra miala azy ireo sy ny zavatra hitranga aminy amin'ny ho avy.
Nanana jiro tsy hitany izy - ary io hazavana io dia nanambara taminy ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty tany Jodia. Nifehy tanteraka ny zava-nitranga izy. Azony natao ny nanakana ny fisamborana raha tiany izany; azony natao ny nampiato ny fitsarana tamin'ny teny iray, saingy tsy izany. Nanapa-kevitra ny hanao izay ho tonga eto an-tany izy.
Ilay lehilahy izay nanome aina ny maty dia vonona ny hanome ny fiainany ho an'ny vahoaka satria nanana fahefana tamin'ny fahafatesana izy, na dia ny fahafatesany aza. Tonga teto an-tany toy ny olombelona mety maty izy mba hahafatesany, ary toa ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny fandinihana tsy misy farany dia tena nitranga tamin'ny famonjena antsika. Tsy te-ho mody aho fa ny zava-dratsy rehetra dia avy amin'ny planeta na tsara ataon'Andriamanitra, fa mino aho fa mahavita manao zavatra tsara amin'ny zava-dratsy Andriamanitra ary mahita ny zava-misy izay tsy hitantsika.
Mijery any ankoatry ny fahafatesana izy ary mifehy ireo fisehoan-javatra ankehitriny tsy dia kely loatra - saingy matetika tsy hita maso amintsika tahaka ny tamin'ny mpianatra izany. Tsy afaka mahita ilay sary lehibe izahay ary indraindray tafintohina ao anaty haizina isika. Tokony hatoky an'Andriamanitra hanao zavatra araka ny fomba tsara indrindra izy.
Nankany Betania i Jesoa sy ny mpianany ary nahalala fa efa efatra andro tao am-pasana i Lazarosy. Natao ny lahatenim-pandevenana ary efa ela ny fandevenana - ary farany dia tonga ny dokotera! Hoy i Marta, angamba tamin'ny famoizam-po kely sy ratra mafy: "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko" (and 21). Niantso anao izahay andro vitsivitsy lasa izay ary raha tonga ianao tamin'izany dia mbola velona i Lazarosy.
Mety ho diso fanantenana ihany koa aho - na, mety kokoa, kivy, tezitra, misafotofoto, kivy mafy - sa tsy izany? Nahoana i Jesosy no namela ny anadahiny ho faty? Eny fa ahoana? Matetika isika no mametraka fanontaniana mitovy amin'izany ankehitriny - naninona Andriamanitra no namela ny malalako ho faty? Fa maninona no navelany hisy izany na izany loza izany? Raha tsy misy ny valiny dia miala amin'ny fahatezerana amin'Andriamanitra isika. Fa Maria sy Marta, na dia diso fanantenana aza, naratra ary tezitra kely, dia tsy nivily. Nanana fanantenana kely fanantenana i Marta - nahita hazavana kely izy: "Fa na dia izao aza dia fantatro: izay angatahinao amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao" (andininy 22). Angamba nieritreritra izy fa somary sahy loatra ny mangataka fitsanganana amin'ny maty, saingy manasongadina zavatra iray izy. «Ho velona indray i Lazarosy», hoy i Jesosy ary namaly i Marta: «Fantatro tsara fa hitsangana amin'ny maty izy» (saingy nanantena aho fa kely sisa dia hisy). Hoy Jesosy: “Tsara izany, fa fantatrao ve fa Izaho no fananganana ny maty sy fiainana? Raha mino ahy ianao dia tsy ho faty mandrakizay. Heverinao ve ny? "
Avy eo i Marta dia nilaza tao amin'ny fanambarana iray tena niavaka tamin'ny Baiboly iray manontolo: "Eny, mino izany aho. Zanak'Andriamanitra ianao" (andininy 27).
Ny fiainana sy ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hita afa-tsy ao amin'i Kristy ihany - fa afaka mino ve isika androany izay nolazain'i Jesosy? Mino ve isika fa "izay rehetra mipetraka ao ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay". Maniry aho mba hahafahantsika rehetra hahatakatra bebe kokoa izany, saingy fantatro miaraka amin'ny fahatokisana fa hisy fiainana vaovao hipoitra amin'ny fitsanganana tsy misy farany.
Isika rehetra dia maty amin'ity vanimpotoana ity, toa an'i Lazarosy sy Jesosy ihany, fa i Jesoa hanangana antsika. Maty isika, fa ho antsika tsy ity no faran'ny tantara, toy ny tsy nifaranan'ny tantaran'i Lazarosy. Nandeha i Marta haka an'i Maria sy Maria tonga tany amin'i Jesosy nitomany. Jesosy koa dia nitomany. Fa maninona izy no nitomany rehefa efa nahalala fa hiaina indray i Lazarosy? Fa maninona no nanoratra i Jaona rehefa fantatr'i Johannes fa miaina "mifanila ery fotsiny ny fifaliana"? Tsy fantatro - tsy fantatro foana hoe nahoana aho no mitomany, na dia amin'ny fotoana mahafaly aza.
Nefa heveriko fa ny fanambarana dia tsara raha mitomany amin'ny fandevenana, na dia fantatsika aza fa hatsangana amin'ny maty tsy mety maty ity olona ity. Nampanantena i Jesosy fa tsy ho faty intsony isika, kanefa mbola misy ihany ny fahafatesana.
Ny fahavalo dia mbola fahavalo. Mbola misy zavatra eto amin'ity tontolo ity izy fa tsy izay ho amin'ny mandrakizay. Matetika isika dia mahatsapa fotoana malahelo lalina, na dia tia antsika aza i Jesosy. Rehefa mitomany dia miantso antsika i Jesosy. Hitany ny alahelontsika amin’izao vanim-potoana izao, toy ny mahita ny fifaliana rahatrizay.
"Esory ny vato," hoy i Jesosy, ary hoy i Maria taminy: "Ho maimbo izy, satria efa hefarana izay."
Misy zavatra mahasoa ve amin'ny fiainanao izay zavatra tsy tianareo i Jesosy hampahafantatra "ny fanodinana ny vato?"
Misy zavatra toa izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, zavatra izay aleontsika miafina. Indraindray Jesosy dia manana drafitra hafa satria mahafantatra zavatra tsy fantatsika izy ary afaka matoky azy fotsiny isika. Dia nanakodia ny vato izy ireo ary nivavaka Jesosy ary niantso hoe: Ry Lazarosy, mivoaha! "Ary nivoaka ny maty," hoy ny tatitra nataon'i Johannes - saingy tsy maty intsony izy. Nifatotra lamba fasana toy ny maty izy, nefa lasa. "Vahao ny fatorana aminy," hoy Jesosy, "ary avelao handeha izy!" (Andininy 43-44).
Ny antson'i Jesosy dia mandeha amin'ny maty ara-panahy koa ankehitriny ary ny sasany amin'izy ireo dia mandre ny feony ary mivoaka avy amin'ny fasan'izy ireo. Avy amin'ny fofona izy ireo, avy amin'ny eritreritra feno fitiavan-tena izay nitarika ho amin'ny fahafatesana. Inona no ilainao Mila olona hanampy anao hanaisotra ny vatanao ianao hialana amin'ny fomba fisainana taloha izay mora apetraka aminay. Anisan'ny andraikitry ny fiangonana izany. Manampy ny olona hanakodia ny vato isika, na dia misy fofona aza ary manampy ny olona mamaly ny antson'i Jesosy.
Mihaino ny antson'i Jesosy hanatona azy ve ianao? Fotoana hivoaka avy amin'ny "fasananao". Angamba fantatra fa misy olona miantso an'i Jesosy? Fotoana hanampiana azy hanakodia ny vato hiala. Ity no zavatra tokony hoeritreretina.